Soo dejisan Bitwar Data Recovery 6.5 – Vessoft
WindowsNidaamkaSoo celinta iyo soo celintaBitwar Data Recovery
Bogga rasmiga ah: Bitwar Data Recovery
Bitwar Data Recovery – software si uu u soo kabsado xogtii lumay ama si kas ah loo tirtiray. Nidaamku wuxuu ka soo kaban karaa noocyo badan oo faylasha ah, oo ay ku jiraan sawirrada, emails, aruurinta, muuqaalka faylasha, dukumiintiyada, maqalka, videos iyo macluumaadka kale ee faa’iido leh. Bitwar Data Recovery waxay taageertaa habka scan si dhakhso ah loogu raadiyo faylasha la tirtiray ama qaabaysan ee qaybta la rabo ee qashinka adag ama qalabka la qaadi karo ee ku xiran kombuyuutarka, iyo habka taranka qoto dheer haddii xogta lumay aan la ogaan intii lagu jiray taranka hore. Ka dib markii qaybta lagu hubiyey xogta lumay, software wuxuu soo bandhigaa dhammaan faylasha la helay oo loo kala soocayo nooc, hab iyo wakhti. Bitwar Data Recovery waxay sidoo kale awood u yeelatey in la qaabeeyo goobaha scan iyo interface software iyadoo loo eegayo baahida shakhsiyeed ee user.
Soo kabashada xogta qalabyada la qaadan karo
Raadi faylasha lumay qaabab kala duwan
Nidaamyada sarreysa oo qoto dheer
Dib u soo celinta faylasha laga soocay qaabeyn qaabeyn ah haddii qaybta aan la lumin
Soo dejisan Bitwar Data Recovery
Faallo ku saabsan Bitwar Data Recovery
Bitwar Data Recovery Xirfadaha la xiriira